म’र्छु भ न्दै यी युवती झोलुंगे पुलको पिल्लर माथि चढेपछि……. – My Blog
म’र्छु भ न्दै यी युवती झोलुंगे पुलको पिल्लर माथि चढेपछि…….
No Comments on म’र्छु भ न्दै यी युवती झोलुंगे पुलको पिल्लर माथि चढेपछि…….
काठमाडौ । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी जोड्ने पुलमा आइतवार एक अनौठो घटना भएको छ । जसले केही बेर त्यहाँका स्थानिय र आफन्तलाई तनाव दियो । एक महिला देह त्याग गर्छु भन्दै दोधारा चाँदनी जोड्ने झलुंगे पुल माथि चढेकी थिइन् ।
उनको देह त्याग गर्ने प्रयास आफन्त र स्थानियले असफल बनाए । आइतबार दिउँसो पिल्लरको टुप्पोमा पुगेर उनले आफन्तलाई फोन गरिन् । म पिलरको टुप्पोमा पुगेकी छु अब देह त्याग गर्छु भन्दै आफन्तलाई चेतावनी दिँदै उनले फोन गरेकी थिइन् ।
आफन्तलाई यस्तो चे’ताव’नी दिएपछि आफन्तहरु प्रहरी लिएर घटनास्थल पुगेका थिए । प्रहरीको सहयोगमा उनका आफन्तले फकाएर पिल्लरबाट तल झारेको झोलुंगे प्रहरी चौकीका असई प्रतापबहादुर थापामगरले बताए। प्रहरीले ती महिलालाई आफन्तको जिम्मा लगाएको छ। मानसिक अवस्था ठिक नभएको भनिएकी ती महिलाको माइत दोधारा चाँदनी भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, कैलालीको धनगढीस्थित नवजीवन अस्पतालमा एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा डोटीको शिखर नगरपालिका–६ की २६ वर्षीया कल्पनासिंह मल्ल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
शनिबार राति सुुत्केरी भएकी मल्लको अवस्था गम्भीर भएपछि सो अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएकोमा आज बिहान ८ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अत्याधिक रक्तस्रावका कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । कल्पनाले जन्म दिएको बच्चालाई सो अस्पतालकै एनआइसीयुमा राखिएको जनाइएको छ । तर मृतकका आफन्तले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण कल्पनाको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अस्पतालसँग मेडिकल रिपोर्ट माग गर्दै मृत्युको यथेस्ट कारण खुलाउन भन्दै अस्पताल घेराउ गरेको बताइएको छ ।
← डुंगा दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु, १ जनाको शव निकालियो बाँकी खोजी हुँदै → भक्तपुरबाट हिँडेका कमानसिंह लामामाथि गेटैमा खु कुरी प्र हार, यस्तो छ अवस्था
ससुरालीलाई प्रत्येक महिना ३३ हजार दिन्थेँ अब झन माग बढाए-थेग्न सकिन’ भन्दै युवकले जिवन त्यागे
आर्मी ब्यारेकवाट आर्मि श्रीमान हराउदा श्रीमतीको बेहाल, गाउ देखि काठमाण्डौं सम्म खोज तलास गर्दै श्रीमति, सीसीटीभी क्यामेरा हेर्दा जे देखियो (भिडियो सहित)
भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
चारवटा पाटेबाघको घेराबाट जोगिएकाको अनुभव : ‘आफू बाँचेको विश्वासै भएन’ ज्यान जोगाउन हतार–हतार…..